Jidka cusub ee u furmaya nolosha qoysaskeenna. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Jidka cusub ee u furmaya nolosha qoysaskeenna.
Muqdisho – Wada noolaanshaha waxa ay ku haboontahy jecel iyo ku qanacsanaan ay isku qanacsanyihiin labada qof ee doonaya in ay wada noolaadaan, hadaba side loo heli karaa qoysas kuwada nool jeceyl iyo is marxabeyn? Heer intee la’eg ayuu la egayhay ku noolaanshaha jaceylka ee qoysaska Soomaaliyeed? Su’aalaasi waxaa ka jawaabaya Sheikh Ahmed Jowhari oo inta badan ka shaqeeya wacyi galinta bulshada iyo qoysaska sida ay u isku raagi lahaayeen:
Previous: Idaacadda Himilo oo daah furtay tartan Qur’aan oo u gaar ah gabdhaha
Next: Waaberi oo sanadki afaraad oo xiriir ah usoo baxday fiinaalaha tartanka kubadda cagta degmooyinka Gobolka Banaadir+Sawirro